အရိုး နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကုသမှုတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဆေးရုံ ရွေးချယ်ကြမယ် - Hello Sayarwon
အကြာကြီးထိုင်ပြီးလို့ ထလိုက်တိုင်း။ လှေကားတွေတက်လိုက်တိုင်း အရိုးအဆစ်တွေထဲက တဂျွတ်ဂျွတ်မြည်ပြီး စုတ်တသက်သက်နဲ့ နာလိုက်တာလို့ ဖြစ်နေရတဲ့သူတွေရှိလား….. အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတဲ့အခါ အရိုးသိပ်သည်းဆ လျော့နည်း လာတာကြောင့် အရိုးတွေက ထိခိုက်လွယ်မယ်၊ ဒဏ်ဖြစ်လာမယ် ဆိုတာက ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ ပြဿနာတွေပေါ့။ အရိုးထိခိုက်မှုက အသက်အရွယ်ကြောင့်တင် မဟုတ်ပါဘူး။ မတော်တဆထိခိုက်မှုတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီပြဿနာတွေက အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနိုင်မှ တော်ကာကျမယ့် ကျန်းမာရေးပြဿနာပါ။ ဒီလိုပြောရတဲ့အကြောင်းအရင်းက အရိုးက ခန္ဓာကိုယ်ကို အကောင်းဆုံးတည်ရှိစေပြီး လှုပ်ရှားမှုတွေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အားဖြည့်ပေးထားလို့ပါ။
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရေးပါဆုံးသော အရာတစ်ခု………..
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေက အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီအစိတ်အပိုင်းတွေထဲမှာ အရိုးကလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ပါပဲ။ အရိုးအဆစ်တွေကျန်းမာမှ လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေကို အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အရိုးအဆစ်တွေ ထိခိုက်တဲ့အခါ လှုပ်ရှားရတာ မလွယ်တာမျိုး ကြုံဖူးမှာပါ။ အရိုးထိခိုက်တာ အရမ်းပြင်းထန်လာမယ်ဆိုရင် နေ့စဉ်ဘဝ လှုပ်ရှားမှုမှာ ထိခိုက်တာမျိုးတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရိုးအဆစ်တွေ ကျန်းမာစေဖို့ကလည်း မဖြစ်မနေ ဂရုစိုက်ဖို့လိုမယ့် အရာပါ။
အရိုးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အရာတွေက ဘာတွေများလဲ………..
အရိုးကို အဓိကထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေက
မတော်တဆ ထိခိုက်မှု တစ်ရပ်ရပ်ကြောင့် အရိုးထိခိုက်ပျက်စီးတာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အရိုးမှာ ခံစားရနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ……….
အရိုးမှာ ခံစားရနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာက တစ်ခုမကရှိပါတယ်။
အရိုးတီဘီ စတဲ့ရောဂါတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အရိုး ကျန်းမာရေးပြဿနာ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပါ
အရိုးအဆစ်တွေ ထိခိုက်မှုက အမြန်ဆုံးကုသနိုင်လေ အဆင်ပြေလေလေပါ။ အကြောင်းကတော့ အရိုးကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းမှုက နေ့စဉ်ဘဝမှာ ထိခိုက်မှုတွေများနိုင်တာကြောင့်ပေါ့။ ဒါကြောင့် အရိုးနဲ့ပတ်သက်လာရင် အမြန်ဆုံးကုသမှုခံယူဖို့ လိုပါမယ်။ ဒီလိုကုသတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းကို သေချာလေးရွေးချယ်ဖို့လိုပါမယ်။ စိတ်ချရတဲ့ ကျန်းမာရေးကုသစောင့်ရှောက်မှု ရရှိရေးက အရမ်းကို အရေးပါတဲ့ အချက်တစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် အသက်အရွယ်ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်၊ မတော်တဆမှုကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် အရိုးမှာ ထိခိုက်မှုဖြစ်လာတဲ့အခါ ဒီအချက်လေးတွေကို သတိထားလို့ ဆေးရုံ၊ဆေးခန်း ရွေးစေချင်ပါတယ်။
သွားရောက်ကုသမှုမယ့်ဆေးရုံက အစိုးရရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုရရှိရဲ့လား
ဒါက မဖြစ်မနေစဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက်တစ်ခုပါ။ အကြောင်းကတော့ ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးတာကြောင့် အသိအမှတ်ပြုချက်ရထားတဲ့ ဆေးရုံမှာ ကုသမှ ခိုင်မာတဲ့ အာမခံချက်တစ်ခုရရှိမှာကိုး။ အရေးပေါ် အခြေအနေကြောင့် အရိုးထိခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းပေးနိုင်တာမျိုးကို သတိထားရွေးချယ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
လူနာတွေကို အကောင်းဆုံး စောင့်ရှောက်မှုပေးနေရဲ့လား
ဒါကလည်း လူနာတိုင်းအနေနဲ့ ထည့်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှု မကောင်းတဲ့ ဆေးရုံမှာ တက်ရောက်ကုသမှုခံရတာက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှု မသက်သာတဲ့အပြင် စိတ်ပင်ပန်းမှုကြောင့်ပါ မလိုအပ်ဘဲ ဝန်ပိသွားနိုင်တာကြောင့်ပါ။ ဆေးရုံက အိမ်လောက် နွေးထွေးတာမျိုး မဖြစ်နိုင်တာမှန်ပေမယ့် လိုအပ်တဲ့ စောင့်ရှောက်မှုကို လိုအပ်ချက်တစ်စုံတရာမရှိဘဲ ပေးနိုင်တာမျိုးဖြစ်ဖို့ လိုပါမယ်။ ဥပမာ နိုင်ငံခြား သွားကုသမယ်ဆိုရင် မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် အထူးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာမျိုးရှိရဲ့လားဆိုတာကို စုံစမ်းပြင်ဆင်သင့်တယ်။
တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ဆရာဝန်တွေ ရှိရဲ့လား
တတ်ကျွမ်းနားလည်သူတွေနဲ့ သေချာလေးကုသမှ ရောဂါက အချိန်တိုတိုနဲ့ မြန်မြန်သက်သာမှာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ကုသချင်တာက အရိုးအဆစ် ကျန်းမာရေးဆိုရင် အရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာဝန်တွေရှိနေတဲ့ ဆေးရုံကို သေချာလေးရွေးချယ်မိဖို့ လိုပါမယ်။
ဆေးရုံတိုင်းမှာ သူတို့ အားသာချက်တွေရှိစမြဲပါ။ အရိုးအဆစ်ကုသချင်တာကို နှလုံး၊ကျောက်ကပ် အထူးကုသပေးနေတဲ့ ဆေးရုံမှာ ကုသလို့က ထိရောက်မှုအားနည်းမယ်ဆိုတာ အသေအချာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ခံစားနေရတဲ့ရောဂါကို အဓိကထားကုသတဲ့ဆေးရုံကို သေချာလေး ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါမယ်။ ဒီနေရာမှာဆိုရင် အရိုးကုသမှာဖြစ်လို့ အရိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ အကောင်းဆုံး နာမည်အကြီးဆုံးကိုရှာဖွေသင့်တယ်။
ဆေးရုံရဲ့ သန့်ရှင်းမှုစနစ်ကရော ဘယ်လိုလဲ
ခံစားနေရတဲ့ရောဂါကို ကုသပါတယ်ဆိုမှ နောက်ထပ်ရောဂါတိုးမလာဖို့ဆိုရင် သန့်ရှင်းတဲ့ဆေးရုံဖြစ်ဖို့လိုပါမယ်။ ဒါကြောင့် ကုသမှုခံယူဖို့ ဆေးရုံရွေးတယ်ဆိုရင် သန့်ရှင်းမှုရှိတဲ့ ဆေးရုံဖြစ်ဖို့လိုပါမယ်။
ဘယ်လို ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုတွေ ရနိုင်လဲ
ကိုယ်တက်ရောက်ကုသမယ့်ဆေးရုံက ပေးနေတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကို သေချာလေး သိထားဖို့ကလည်း မဖြစ်မနေလိုအပ်မယ့်အချက်တစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသတော့မယ်ဆိုရင် ကုသမှုခံယူမယ့် ဆေးရုံက ပေးနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကို သေချာသိအောင်လုပ်ထားဖို့ကလည်း မဖြစ်မနေ လိုအပ်မှာပါ။
ကုသမှုခံယူတိုင်း မဖြစ်မနေ စဉ်းစားရမယ့် အချက်တစ်ခုက အောင်မြင်မှု မှတ်တမ်းကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားရဲ့လားဆိုတာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တက်ရောက်ကုသမှုခံယူမယ့် ဆေးရုံအကြောင်းကို အွန်လိုင်းကနေဖြစ်ဖြစ် သိထားတဲ့သူတွေဆီကနေဖြစ်ဖြစ် မေးမြန်းကြည့်ပါ။ တိကျတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ရယူပါ။ ဒါကလည်း ကုသမှုခံယူမယ့်သူတိုင်းအတွက် မဖြစ်မနေ စဉ်းစားရမယ့် အချက်တစ်ခုပါ။
ဒီအချက်တွေအပြင် နောက်ထပ်စဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေက ဆေးရုံက ဆေးကုသမှု မှတ်တမ်းကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားရဲ့လား ဆိုတာနဲ့ ဆေးရုံဆင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာရော ဘယ်လို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ ပေးလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကို သေချာလေးစဉ်းစားဖို့လိုပါမယ်။
ဒီလောက်များတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ဆေးရုံကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ အရိုးအဆစ်ကုသမှုကို အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာကြောင့် King of Bones and Joints ရယ်လို့တင်စားခံရတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ဝေ့ဌာနီ(Vejthani Hospital)ဆေးရုံ ရှိပါတယ်။ ကုတင် ၂၆၃ ဆန့်ဝေ့ဌာနီဆေးရုံကြီးမှာ ဆရာဝန်အင်အား အယောက် ၃၀၀ နီးပါး သူနာပြုအင်အား အယောက် ၂၀၀ ခန့်နဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်က လူနာဦးရေ ၃၀၀၀၀၀ နီးပါးကို အကောင်းဆုံးကုသမှုတွေပေးနေပါတယ်။ ဒီဆေးရုံရဲ့နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုက လူနာတွေကိုလေယာဉ်နဲ့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်မှုတစ်ရပ်ပါ။နှလုံးရောဂါ၊ လိပ်ခေါင်း၊ အရိုးအကြော၊ ကင်ဆာနဲ့ အမျိုးသမီးရောဂါတွေအပါအဝင်ရောဂါတော်တော်များများကို တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင် အထိရောက်ဆုံး ကုသမှုတွေပေးနေတာပါ။ ဘာသာစကားအခက်အခဲ မရှိအောင်လည်း မြန်မာဘာသာပြန် အပါအဝင် တခြားဘာသာစကား ဘာသာပြန်တွေနဲ့လည်း စီစဉ်ပေးထားလို့ ဘာသာစကားအခက်အခဲကြောင့် ပြဿနာမရှိနိုင်ပါဘူး။
ကဲ…. အရိုးအဆစ်ပြဿနာတွေကြောင့် စိတ်ညစ်မနေပါနဲ့။ တတ်ကျွမ်းတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ ဆေးရုံမှာ အမြန်ဆုံးကုသမှုတွေ ခံယူပြီး အရိုးအဆစ်နာကျင်မှု ကင်းတဲ့နေ့ရက်တိုင်းကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးယူလိုက်ပါ။
Vejthani (ဝေ့ဌာနီ ) ဆေးရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး အချက်အလက်တွေကို ပိုမို သိရှိလိုပါက banner logo လေးကို click တောက်ကြည့်လိုက်ပါ။
Tips on How to Pick an Orthopedic Hospital and Surgeon https://www.hss.edu/playbook/tips-on-how-to-pick-an-orthopedic-hospital-and-surgeon/ Access Date 28 February 2020
How to choose the best hospital for surgery https://medlineplus.gov/ency/article/007497.htm Access Date 28 February 2020
How to Choose an Orthopedic Surgeon for Your Knee Replacement https://www.healthline.com/health/total-knee-replacement-surgery/orthopedic-surgeon#1 Access Date 28 February 2020